မျက်ရစ်ရှိသယောင်ထင်ရစေမယ့်မျက်ဝန်းလေးအတွက် cut crease look ကအထာကျကျဘယ်လိုပံ့ပိုးမလဲ? | CosmeticMyanmar
Home » Article » မျက်ရစ်ရှိသယောင်ထင်ရစေမယ့်မျက်ဝန်းလေးအတွက် cut crease look ကအထာကျကျဘယ်လိုပံ့ပိုးမလဲ?
မျက်ရစ်မရှိလို့စိတ်ညစ်နေကြတဲ့ အသဲတို့အတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ဖန်ဆင်းပေးမယ့် cut crease make up လေးက ဝိုးကနဲဖြစ်သွားလောက်စေပါတယ်။ Cut crease ဆိုတာက မျက်ရစ်ရှိတဲ့ နေရာကို ခေါက်ချိုးရာလေးပေးလိုက်သလိုမျိုး ထင်ရစေတဲ့ look မျိုးပါ။ နမျက်ရစ်ရှိတဲ့သူတွေကတော့ မျက်ရစ်မရှိတဲ့သူတွေကတော့ အရမ်းအဆင်ပြေပြီး လိုက်ဖက်မှုရှိစေပါတယ်။ ပြင်ဆင်ခြယ်သချင်ရင်တော့ creamy ဖြစ်တဲ့ concealer ရယ်၊ eyeshadow အပြောင်လေးတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ အော် blending brush ကောင်းကောင်းလေးတစ်ချောင်းလေးလိုသေးတယ်နော့။ ပျိုမေတို့လိုက်ပြီး ပြင်ဆင်ခြယ်သနိုင်အောင်ပုံလေးတွေနဲ့ ပြသလိုက်တယ်နော်။
Happy #TutorialTuesday! ✨ @makeupbyliha uses our Liquid Suede Metallic Mattes in ‘Biker Babe’ + ‘Go Rogue’ to create this ultra-precise #EOTD! 💥 After she cuts her crease, she goes in withathin liner brush to perfectly wing out her liner! 👀❤ || #nyxprofessionalmakeup #nyxcosmetics
A post shared by NYX Professional Makeup (@nyxcosmetics) on Apr 3, 2018 at 12:26pm PDT
Cut crease ကို လှသထက်လှသွားအောင် ထောက်ပံ့ပေးတာကတော့ winged eyeliner ထင်းထင်းလေးတစ်ကြောင်းပါ။ မျက်ဝန်းကိုပိုကြီးသယောင်ထင်ရစေပါတယ်။
မျက်တောင်တုကတော့ optional ပါ။ မျက်တောင်ရှည်တဲ့သူတွေကတော့ မျက်တောင်ကော့ဆေးလေးနဲ့ တစ်ချက်နှစ်ချက်တင်လိုက်ရုံနဲ့ အဆင်ပြေပေမယ့် မျက်တောင်တိုတဲ့သူတွေကတော့ false lashes တပ်ပေးရပါမယ်။ ဒါမှ ကော့ညွှန်းတဲ့မျက်တောင်လေးနဲ့ အထာကျတဲ့ eyes look လေးနဲ့ so prefect!
Glow into the weekend! @jensinek_mua wears our Duo Chromatic Illuminating Powder in ‘Snow Rose’ ✨❄🌹 || #nyxcosmetics #crueltyfreemakeup
A post shared by NYX Professional Makeup (@nyxcosmetics) on Feb 2, 2018 at 12:41pm PST
Cut crease look လေးတွေက မျက်လုံးမှိတ်ထားရင် ဒီလိုလေးအထာကျနေမှာနော်။
Cut crease make up တွေက အထာကျပေမယ့် ပြင်ဆင်ရတဲ့အချိန်လေးကတော့ အနည်းငယ်ပေးရပါတယ်။ ဒါမယ့်လည်းလှဖို့အတွက်ဆိုတော့ ပေးသင့်ပါတယ်လေ။ အဓိကက blend လုပ်တဲ့နေရာလေးကို စိတ်ရှည်ရှည်လေးနဲ့ ပြင်ဆင်ပေးပါလို့။
ကဲ ပျိုမေတို့ရေ cut crease လေးကို စမ်းပြီးခြယ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ ပြီးတော့ မိမိဘာသာဖန်တီးထားတဲ့ creative look လေးတွေရှိရင်လည်း cb ကနေ ပို့ပေးလို့ရပါတယ်နော်။
နောက်တစ်ခေါက်မှာ cut crease ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာကို အသေးစိတ်ပြောပြပေးသွားပါမယ်။ promise
Cosmetic myanmar page လေးကို see first လေးလုပ်ထားရင် ပိုအဆင်ပြေတာပေ့ါ။
အိမ်မှာတင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ DIY facial spray လေးတွေအကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်း